Sun, Apr 22, 2018 | 18:05:38 NST
16:43 PM ( 11 months ago )
Total Views: 33.3 K
कृष्ण गिरी -
वडा नम्वर १९ र २० मा नेपाली कांग्रेसको प्रभाव राम्रो भएकोले गठबन्धन उम्मेदवार र उहाँको पार्टी पंक्ति परिणाम आफ्नो पक्षमा आउन सक्ने आशमा थिए । दुई मध्ये १९ नम्वर वडाबाट भने त्यत्ति धेरै आशावादी थिएनन् जति २० नम्वर वडाबाट थिए ।
१९ नम्वरको मतगणनाको परिणामले लगभग मेयरको छिनोफानो गर्ने विषयमा शङ्का थिएन । जनमत बाक्सामा थियो तर यसअघिको मतगणनालाई विश्लेषण गर्दा रेणुले चुनाव जित्न १९ नम्वर वडाको मतगणना सकिँदा देवीसँगको मत अन्तर पाँचसय भन्दा तल झार्न सक्नुपथ्र्यो । १९ नम्वरमा कुल खसेको दुई हजार आठसय ६० मत मध्ये एक हजार आठसय मतगणना सकिई सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार देवी ज्ञवाली रेणु दाहालभन्दा सात सय ३३ मतले अगाडि हुनुहुन्थ्यो । देवीले ४१ हजार छ सय ४१ र रेणुले ४० हजार नौ सय आठ मत प्राप्त गरेका थिए ।
एकपटकमा छ वटा समूहमा विभाजन गरेर छ सय मत गणना गरिएपछि नतिजा सार्वजनिक गरिँदै आएको थियो । गणकहरुका अनुसार एक हजार आठसय पछिको छ सय अर्थात् दुई हजार चार सय मत गणना सकिनै लागेको थियो । सोचेजस्तो मत नआएपछि र देवीलाई १९ नम्वरको मतगणना सकिँदा सातसय भन्दा तल झार्न नसकिने पक्कापक्की भएपछि माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता तनावमा देखिन्थे । भरतपुर महानगरमा आफूलाई बलियो दावी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गरेपछि आफूले मेयर जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क रहेका माओवादी नेताहरु र स्वयम् गठबन्धनका मेयर उम्मेदवार रेणु दाहाल नतिजा आफ्नो पोल्टाबाट गुमिसकेको बुझिसकेका थिए । किनभने २० नम्वर वडाबाट माओवादीले देवीको भन्दा तीन सय देखि तीन सय पचास भन्दा माथि मत थप्न नसक्ने आँकलन थियो ।
निर्वाचनपछि एमाले र कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले आफूले चुनाव जित्ने दावी त गरे तर जब मतगणना सुरु भयो कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी सोचेजस्तो मत नपाएपछि जित्ने कुरामा सशंकित हुँदै गयो । मत परिणाले एमाले ढुक्क नभएपनि आशावादी बन्दै गयो । जेठ १४ गते रातको पौने १२ बजेको थियो । १९ नम्वरको दुई हजार चार सयको मतगणना सकिनै लाग्दा सात सय ३३ बाट देवीको मत घट्नुको सट्टा बढ्ने देखेपछि मतगणनामा बसेका माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन वाइसियलका जिल्ला इन्चार्ज मधु न्यौपाने दौडिएर मतपत्र भएको ठाउँमा पुगेर च्यात्न थाले । पत्रकारलाई मतगणनास्थल कवर्ड हलको च्यानल गेटबाट भित्र जान दिइएको थिएन । तर बाहिरबाट झण्डै ७/८ मिटरको दुरीमा मतगणना गर्दै गरेको दृश्य च्यानल गेट बाहिरबाट सहजै देख्न सकिन्थ्यो । भित्र जे भइरहेको थियो त्यो च्यानल गेट बाहिरबाट छर्लङ्गै देखिन्थ्यो ।
जब वाइसियलका मधु न्यौपानेले मतपत्र च्याते नजिकै रहेका चितवनका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापा र अन्य प्रहरीहरुले तत्कालै उनलाई पक्राउ गरे । प्रहरी उपरीक्षक थापालेनै मतपत्र च्यात्ने माओवादीका मतगणना प्रतिनिधि मधु न्यौपानेको कठालो समाते र मतगणनास्थल बाहिर निकाले । उता, कवर्ड हलको गेट बाहिर रहेका एमाले कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातिएको बिरोधमा र मतगणना नरोक्न माग गर्दै नाराबाजी गर्न थाले । हान् हान्.....नछोड् नछोड्.......भन्ने आक्रोशबीच प्रहरीले मतपत्र च्यात्ने मधुलाई तत्काल गाडीमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय लग्यो । त्यसलगत्तै मतगणनास्थलमा फेरि होहल्ला भयो । माओवादीका अर्का मतगणना प्रतिनिधि द्रोणबाबु सिवाकोटीले फेरि मतपत्र च्याते । उनलाई पनि प्रहरीले तुरुत्नै समातेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय लग्यो ।
मतपत्र च्यात्ने माओवादीका मतगणना प्रतिनिधिलाई प्रहरीले गाडीमा हालेर लग्न खोज्दै थियो । त्यतिकैमा कवर्ड हल बाहिर नाराबाजी गरिरहेका एमालेका केही कार्यकर्ता त्यतैतर्फ पुगे । त्यसक्रममा प्रहरीसँग घम्साघम्सी हुँदा प्रहरीले एमालेका जिल्ला कमिटी सदस्य गङ्गा लामालाई गिरफ्तार गरेर प्रहरी कार्यालय लग्यो । लामालाई प्रहरीले १५ गते बिहान छोड्यो ।
मतगणनास्थलमा रहेका एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल, मेयर उम्मेदवार देवीप्रसाद ज्ञवालीलगायत एमालेका मतगणना प्रतिनिधिले मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेसँग मतपत्रको सुरक्षा गर्न र मतगणना अगाडि बढाउन माग गरे । उनीहरुले मतगणनास्थलको च्यानल गेटभित्रैबाट माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेकोमा आपत्ति जनाउँदै मिडियासँग आफ्ना भनाई राखे र पटक पटक मतगणना गर्न माग गरिरहे । तर पनि मतगणना अगाडि बढाइएन । मतपत्र च्यात्नेलाई प्रहरीले समातेपछि केहीबेर होहल्ला हुँदा माओवादीका केही मतगणना प्रतिनिधिले खबरदार.......भन्दै आक्रोश पोखेका पनि देखिन्थ्यो । तर पछि उनीहरु छेउ लागे । परिस्थिति तनावग्रस्त बनेपछि थप प्रहरी बोलाइयो । प्रहरीले समयमै परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । मतपत्र च्यातेकोमा एमालेका मतगणना प्रतिनिधिले मतगणनास्थलमै रहेका माओवादीका नेताहरुप्रति आक्रोश पनि पोखे । तर माओवादी नेताहरु भने मौन बसिरहे ।
च्यातिएका र बाँकी मतपत्र प्रहरीले घेरा हालेर राख्यो । त्यसको केही समयपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले पत्रकारहरुसँग आफू बाथरुमतर्फ जान लागिरहेको अवस्थामा होहल्ला भएको र बाथरुम नगई फर्किंदा मतगणनास्थल रणभूमिको रुपमा रहेको र मतपत्र च्यातिएको देखेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल मतगणना कार्यलाई स्थगित गरेको र निर्वाचन आयोगलाई यसबारे प्रतिवेदन दिने जानकारी गराउनुभयो । त्यसपछि उहाँले अर्को सूचना प्रकाशित गरी समय नतोकिए सम्मका लागि मतगणना कार्य स्थगित गरिएको सूचना जारी गर्नुभयो । त्यहाँ रहेको मतपत्र मुचुल्का गरेर सिलबन्दी गरिएको छ ।
त्यो रात जतिबेला भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरको टुङ्गो लाग्दै थियो मतगणनास्थलमा तीनवटै प्रमुख दलका जिल्ला नेताहरु उपस्थित थिए । नेपाली काँग्रेस चितवनका अध्यक्ष जीतनारायण श्रेष्ठ, सांसदसमेत रहेका नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय नेता नारायण दाहाल, जिल्ला इन्चार्ज इश्वरी भट्टराई माओवादी नेताहरु घनश्याम दाहाल ‘अविनास’, सूर्य शर्मा ‘पथिक’लगायत नेताहरु मतगणनास्थलमै थिए ।
माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच चुनावी तालमेल भएपछि गठबन्धन र एमालेबीच भरतपुरको मेयर कसले जित्ने भन्ने प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो । गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी रेणु दाहाल प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कि छोरी हुन् । रेणुलाई जिताउन प्रचण्ड स्वयम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित चितवन आएका थिए । देउवाले पनि आफ्नो पार्टी पंक्ति र नेता, कार्यकर्तालाई गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन कम्मर कसेर लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका देउवाले रेणुले चुनाव हार्दा माओवादीसँगको सहकार्यमा तलबितल पर्न सक्ने खतरालाई नजिक आउन नदिन पनि रेणुलाई चुनाव जिताउन चाहेको प्रष्ट थियो । रेणुले चुनाव हार्दा चितवन ताकेका प्रचण्डको आगामी राजनीतिक जीवनमा समेत ठूलै धक्का लाग्ने भएकोले प्रचण्ड ‘जसरी पनि’ छोरीलाई चुनाव जिताउन लागिपर्नु अस्वाभाविक थिएन ।
माओवादी केन्द्रका मतगणना प्रतिनिधिले मतपत्र च्याते, एमालेका नेता तथा मतगणना प्रतिनिधिले त्यसको बिरोध गरे तर त्यहाँ रहेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन् । देशकै सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसका लागि जनताले ल्याप्चे लगाएर दिएको मताधिकार च्यात्दा टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने त्यस्तो के बाध्यता आइप¥यो ? कालान्तरसम्म नेपाली कांग्रेसका लागि यो असाध्यै पीडाको विषय बन्न सक्छ । कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै घटनाको सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउन र दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको छ । तर कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नै आँखा अगाडि माओवादीका मतगणना प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेको विषय जनसमक्ष ल्याउन किन सक्दैन ? भरतपुरमा मेयर र उपमेयरमा माओवादी केन्द्रसँग नेपाली कांग्रेसको चुनावी तालमेल हुनुको अर्थ नेपाली कांग्रेस माओवादीले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताको चीर हरण गर्दासमेत मौन बस्नुपर्छ भन्नु हो ?
मतपत्र च्यातिसकेपछि कसैकसैले मतगणनामा रेणुले देवीलाई उछिनेकोले एमालेका प्रतिनिधिले नै मतपत्र च्यातेको झ्यालीसमेत पिटाउन भ्याए । १९ नम्वर वडाको एक हजार आठ सय मत गणनासम्ममा देवी ज्ञवाली सात सय ३३ मतले रेणुभन्दा अगाडि रहेकामा थप छ सयको मतगणना भइरहँदा कसरी रेणु देवीभन्दा अगाडि पुग्न सक्छिन् ? यस्तो हास्यास्पद प्रोपोगाण्डा फैलाएर नागरिकलाई उल्लु बनाउन खोज्ने ? एमालेले त मतगणना तत्काल सुरु गर्न माग गरेको छ तर माओवादीले आफै मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउन माग गरिरहेको छ । यदि देवीको भन्दा रेणुको मत सङ्ख्या अगाडि भएको भए र आफ्नो जित सुनिश्चित देखेको भए माओवादीले पुनः मतदान होइन मतगणना तत्काल अगाडि बढाउन माग गथ्र्यो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर १९ मा पुनः मतदानको माग गरेका छन् भने नेकपा एमालेले माओवादीले केही मतपत्र च्यातेपनि ती मतपत्रसहित अरु मतपत्र शिलबन्दी गरेर राखिएकोले बाँकी मतगणना तुरुन्त अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यो वडाको एक हजार आठ सय मतगणनाको परिणाम सार्वजनिकसमेत गरिसकिएको र दुई हजार चारसय मत गणना अन्तिम अवस्थामा पुगेको बेला गणना भइसकेका बीस÷पच्चीसवटा र गणना हुन बाँकी केही मतपत्र च्यातिएको तथा अरु मतपत्र सुरक्षित रहेको अवस्थामा पुनः मतगणनालाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ । केही मतपत्र च्यातिएको मात्र हो मतगणनास्थलनै कव्जामा लिएर सबै मतपत्र नष्ट गरेको होइन । केही मतपत्र च्यात्नेलाई प्रहरीले उतिबेलै पक्राउ गरिसकेको छ । होइन भने हार्न लागेको अवस्थामा मतपत्र च्यात्ने र पुनः मतदान गर्ने कार्य गरिरहने हो भने यसले कस्तो परिपाटी बसाउँछ ?
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ)